राष्ट्रपति बाइडेनको यस्तो संन्देशले प्रधानमन्त्री ओली छक्क, एक्कासी बालुवाटार पुगे अमेरिकी राजदूत | Public 24Khabar
Home News राष्ट्रपति बाइडेनको यस्तो संन्देशले प्रधानमन्त्री ओली छक्क, एक्कासी बालुवाटार पुगे अमेरिकी राजदूत
राष्ट्रपति बाइडेनको यस्तो संन्देशले प्रधानमन्त्री ओली छक्क, एक्कासी बालुवाटार पुगे अमेरिकी राजदूत
नेपाल–चीन सीमाको हिल्सा नाका बन्द हुँदा राडीपाखी व्यवसाय संकटमा परेको छ । नाका बन्दले चीनबाट ऊन ल्याउन नसकेपछि व्यवसायमा असर पुगेको हो । स्थानीय उत्पादनले नपुग्ने भएपछि हुम्लावासीले ताक्लाकोटबाट ऊन ल्याई राडीपाखी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
हुम्लामा लामा समुदायका महिलाले ऊनबाट राडीपाखी, बख्खु, पटुका, कोटलगायत सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । उक्त समुदायका विभिन्न पर्व, उत्सव, पूजा र मेलामा ऊनकै कपडा प्रयोग हुने भएकाले माग उच्च छ । नाम्खा र सिमकोटका अधिकांश घरमा राडीपाखी उत्पादन हुने स्थानीय डोचन लामाले बताइन् ।
‘स्थानीयस्तरमा थोरै ऊन उत्पादन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना र हिमपातले अधिकांश महिला बेरोजगार बन्नुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार हुम्लाबाहिर पनि राडीपाखीको माग बढ्दै गएको छ । गत वर्ष १० वटा राडीपाखी र पाँच वटा बख्खु बुनेकी उनले २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकी थिइन् । गत वर्ष उनले सबै राडीपाखी र बख्खु नेपालगन्ज र काठमाडौं पठाएकी थिइन् ।
Previous articleखुसीकाे खबर: प्रतिक्षाको घडी समाप्त: आजबाट नेपालमा को’रोना खो’प दिन थाल्यो, देशभर वितरण, खो’प दिने बेला यस्तो गरिन्छ (जानकारीका लागि सेयर)
Next articleManisha Koirala र Rekha Thapa को कार्यक्रममा रु’वा’बासी ! अब चुप लागेर बस्दैनौ ! कसैलाई नछो’ड्ने